sources - Synonyms of sources | Antonyms of sources | Definition of sources | Example of sources | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for sources
Top 30 analogous words or synonyms for sources
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် Sources: B-2 Spirit (Pace) Fas.org,
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် In 2011, Greenpeace releasedareport rating the top ten big brands in cloud computing on their sources of electricity for their data centers. At the time, data centers consumed up to 2% of all global electricity and this amount was projected to increase. Phil Radford of Greenpeace said "we are concerned that this new explosion in electricity use could lock us into old, polluting energy sources instead of the clean energy available today," and called on "Amazon, Microsoft and other leaders of the information-technology industry must embrace clean energy to power their cloud-based data centers." In 2013, Microsoft agreed to buy power generated byaTexas wind project to power one of its data centers.
ရွှေမော်ဓောဘုရား(ပဲခူး) မူရင်း သမိုင်းရာဇဝင်( Foundation myth)မှာ ဟင်္သာကုန်းဘက်ကိုထိုးဆင်းသွားသော အရှေ့ဘက်စောင်းတန်းမှာ တည်ရှိခဲ့သည့် မွန်နှင့် ပါဠိ ကျောက်စာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုကျောက်စာတွင် ၁၅ ရာစုက တစ်ချိန်တည်းရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ Donald M. Stadtner မှ သူ့၏စာတမ်းတွင် ” The earliest myth associated with the Shwemawdaw stems from completely different sources than the current legend. Our sole surviving evidence comes inthe form of two 15th-century inscriptions, one in Mon and the other in Pali,both located along the eastern stairway leading to the promontory of the Hintha Kone.” ရေးခဲ့ပါသည်။ မွန်ကျောက်စာမှာ ဂဝမ္ပတိက ကုသိနာရုံ(Kusinagara)မှ ဗုဒ္ဓအံတော်(tooth relic)တစ်ဆူကို သထုံပြည်သို့ ပင့်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ ထို အံတော်ဟာ အလိုအလျောက် ၃၃ ဆူပွားလာခဲ့ပြီး သထုံဘုရင်သည် ထိုအံတော်များဖြင့် ဌာပနာပြီး စေတီ ၃၃ ဆူ တည်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ အံတော် ၃၃ ဆူကို နေရာဌာနအသီးသီးကို ပြောင်းရွှေ့ တည်ထားကိုးကွယ်ကြသည်ဟု မွန် နှင့် ပါဠိ ကျောက်စာ နှစ်ခုလုံးမှာ ဆိုထားပါသည်။ ထို ၃၃ ဆူထဲမှ တစ်ဆူသည် Madhavaဟု ပါဠိကျောက်စာမှာ ဖော်ပြထားပါသည်။ Mudhava ဟု ကလျာဏီကျောက်စာမှာ တွေ့ရှိရသည်။ နောက်ပိုင်းမှာMau Tau(မုဟ်တ´) မွန်ဘာသာဖြင့်ခေါ်ဆိုလာကြသည်။ ထိုမှတဆင့် မွန်ခရိုနစ်ကယ်(Mon chronicle) မှာ “Mohtau Pagoda” or “Muhtau Pagoda” ဟု ရေးသားဖော်ပြရာမှ ရွှေမောဓေါလို့ အမည်တွင်လာခဲ့သည်။